१६ घण्टा ‘टोले डन’को घेराबन्दीमा पर्दा
असुरक्षित आलापोट !
दिनेश गौतम काठमाडाैं, ११ साउन
हरियाली जंगल । जंगलमुनि पातलो बस्ती । झरीपछि खुलेको आकाश । मनोरम दृश्यले चेहरामा कान्ति छाएको थियो । ‘अर्गानिक हावा’ले धड्कन धड्किएको थियो । प्रकृतिको अनुपम उपहारसँग हामी रमाएको थियौं । गन्तव्यमा पुग्न थोरै समय बाँकी थियो । सातघट्टेस्थित पहाडको आँगन हाम्रो प्रतीक्षामा थियो ।
चाबहिल–जोरपाटी खण्डको ‘ज्यानमारा सडक’ छिचोल्दै शुक्रबार दिउँसो सुन्दरीजल पुग्यौं । गन्तव्य थियो, कागेश्वरी नगरपालिकास्थित गागलफेदी सातघट्टे सम्मको ।
सुन्दरीजल नपुग्दै गोकर्णको उकालोमा यशोदाको स्कुटीको टायर पन्चर भयो । झण्डै ३० मिनेट अलमल भयो । त्यसपछि गन्तव्यतर्फ लाग्यौं । सुन्दरीजल बीपी संग्रहालयबाट अलि अगाडि बढेपछि पूर्वतर्फ मोडियो, हाम्रो बाइक र स्कुटी ।
सुन्दरीजल पुलबाट पूर्वतर्फ लाग्नुपर्ने यशोदाको स्कुटी उत्तरतर्फ मोडियो । फेरि केहीबेर अलमल भयो, बाटो भुलेर । हामी पुलकै मुखमा जम्मा भयौं । अनि पूर्वतर्फ बाइक र स्कुटीको एक्सिलेटर दबायौं । आलापोटको स्वच्छ हावा अनि अनुपम वातावरणले चाबहिल जोरपाटीको धुलोधुवाँ, उकुसमुकुस भुलिसकेका थियौं ।
आलापोट फुयाँल चोक पुगेपछि यशोदाको स्कुटीमा ब्रेक लाग्यो । योशदासँगै थिइन् शितल । पछाडि रामले चलाएको बाइकमा थिएँ म । अर्को बाइकमा टेकमान थिए ।
हामी सबैको पछिपछि एक युवा एक्सल होन्डा बाइक हर्न बझाउँदै हुइकिएर आए । किचौलझैं गरी ।
बाटो हिलाम्मे थियो । रोपाइँको लागि तयार भएको खेत भन्दा कम थिएन । रामले त्यो बाइकलाई साइड दिए । स्कुटीमा गएर त्यो बाइक ठोक्कियो । यशोदाको स्कुटीको लुकिङ ग्लास फुट्यो । साइडमा स्क्याच भयो ।
ती युवा र योसदाबीच केहीबेर भनाभन भयो ।
उनीहरुबीच के के भनाभन भयो त्यो भने सुन्न पाएनौं । हाम्रो बाइक पछि थियो । यस्तो सानो कुरामा विवाद गर्नुहुन्न भन्दै म बाइकबाट झरँे । तर ती युवाले म र राममाथि पाखुरा मसार्दै जाइलागे । अनि सुरु भयो ती युवाको ताण्डव !
‘खेल्ने हो ? खेल्ने हो ?’ पाखुरा सुर्कदैँ हामीतिर आयो । भन्छ, ‘यो मेरो इलाका हो । तिमीहरुलाई एकै चिहान बनाउँछु ।’
हामी अवाक भयौं । स्तब्ध भयौं ।
धड्कन बढ्यो ।
उसले हात उचालेपछि मैले भनें, ‘हामी पत्रकारको टोली हौं । यही गाउँको स्टोरी लेख्न आएका । तपाईंसँग झगडा गर्न आएका होइनौं ।’
त्यसपछि अलि हच्कियो ।
स्कुटीलाई उसैले ठक्कर दिएको थियो । भनाभन यशोदासँग भएको थियो । तर आक्रमण गर्न आयो, हामी केटामाथि । हामी बोलेका पनि थिएनौं ।
गाउँलेले घेरिसकेका थिए । तर, कोही बोलेनन् ।
एउटा सरकारी कार आयो । कारको ड्राइभरले सोधे, ‘के भयो ?’ बल्ल स्थानीयले जवाफ दिए, ‘त्यस्तो केही होइन, सामान्य हो ।’
ती युवा भागे ।
हामीले बाँचिएकोमा खुसीको लामो स्वास तान्यौं ।
स्थानीयलाई त्यो युवाको परिचय सोध्यौं । भने, ‘यतैको हो, नाम थाहा छैन ।’ नजिकै प्रहरी चौकी पनि रहेनछ ।
दोधारमा पर्यौं । अघि बढ्ने कि फर्कने ?
गन्तब्यमा पुग्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । अलिकति अघि बढेका थियौं, त्यो निहुँ खोज्ने युवाले थप युवा भेला पारेर बाटो ढुकिरहेका रहेछन् ।
आलापोट र गागलफेदीको सीमाना । प्रदेश सांसद रामेश्वर फुँयालको घरमुनिको डिल रहेछ त्यो ठाउँ । सायद हामीलाई आक्रमण गर्ने उद्देश्यसहित बसेका थिए । चार पाँच वटा बाइकमा युवाको जमात ।
फेरि घेरा हाले ।
‘खोजेको हो ? खेल्ने हो ? एक एक ढाल्छु’ भन्दै एक युवा हामीतिर लम्कियो ।
संयोग, फेरि त्यहीं कार टुप्लुक्क आइपुग्यो । त्यहीं केटाको आवाज आयो, ‘अहिले केही नगर छोड्दे ।’
कारको अगाडि हाम्रो बाइक र पछाडि स्कुटी थियो । म बाइकबाट झरेँ । कारमा रहेकासँग सहायता माग्न । कारमा रहेछन्, सांसद रामेश्वर फुँयाल ।
सोचेँ ‘अब चैं बाँचिन्छ ।’
माननीय ज्यू गाडीबाट झर्नुभयो । हामी बोल्न नपाउँदै ती युवाले भने, ‘कुरा मिलिसक्यो बुबा ।’
अलि पर दोबाटामा फेरि भेटिए ती युवा । भन्यो, ‘सांसदको पावर लाउने ? लु आइज खेलौं ।’ सुनेको नसुन्यै गरेर हामीले बाइकको एक्सिलेटर दबायौं । सातघट्टेस्थित रिसोर्टमा पुगेर ब्रेक लगायौं ।
लामो सास फेर्यौं ।
सांसद फुयालको फोन आयो ।
‘सकुशल पुग्नुभयो ?’
‘आइपुग्यौं । तर, हामीलाई मार्ने धम्की दिएको छ ।’
‘चिन्ता नलिनुस् । सुरक्षाको जिम्मा म लिन्छु ।’
केहीबेरपछि प्रहरीको टोली आइपुग्यो । सायद सांसदले पठाए । प्रहरीले सुरक्षा दियो ।
छेउबाटै बगेको छ, कागेश्वरी खोला । डाँडामा मन्दिर । पहाडको आँगनमा रिसोर्टं । हामीले दिनभरको तनावलाई भुल्यौं । ११ बजेपछि हामी आ–आफ्नो रुममा गयौं । मसँगै रहेका राम र टेकमान निदाए । तर मलाई दिनभरको तनावले निद्रा परेन ।
रातको साढे दुई बजे बिक्रम श्रेष्ठको फोन आयो । घटना सुनाएपछि उनी पनि अत्तिए । साथी नवराजलाई म्यासेज गरेर मोबाइल अफ गरेँ ।
आँखा झिमिक्क नगर्दै बिहानको ६ बज्यो ।
साथी राम, टेकमान र म खोलामा गयौं । पहाड चढ्यौं । रिसोर्ट फर्किएर चियाँ पियौं ।
रिसोर्टमा स्थानीयसँग भेट भयो । एक स्थानीयलाई ती युवाको फोटो देखाएर सोध्यौं, ‘यो केटालाई चिन्नु हुन्छ ?’
‘खै चिन्न सकिनँ ।’
ती स्थानीयले उनको साथीलाई देखाए । फोटो मधुरो भए पनि हुलिया प्रस्ट देखिन्थो । उनले भने, ‘किन नचिन्नु त्यहीँ तलको कृष्णराज खड्का भाइ त हो नि ।’
अनि उनको थर सोध्यौं, खड्का रहेछ । कागेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर २ को खेलकुद विकास समितको अध्यक्ष ।
बिहानको ९ बजे हामी त्यहाँबाट निस्कन थाल्यौं । अघि कुरा गरेका स्थानीयले भने, ‘हिजो आएको बाटो नजानुस् । ती केटाहरुको चार पाँच जनाको ग्याङ हुन्छ । बाटैमा हुन्छन् । जे पनि गर्न सक्छन् ।’
फेरि डरायौं ।
अनि असइ बेदबहादुर भट्टराईलाइ फोन गर्यौ । भने, ‘तल पिलबोट आउनुस्, म यहीँ छु । तपाईंलाई सुन्दरीजल कटाइ दिन्छु ।’
हामी अघिअघि सइसा’पको बाइक पछिपछि । सइसा’पले भन्नुभयो, ‘कसैले रोक्यो भने रोक्नुस्, नडराउनुस् ।’
हामी अघि बढ्यौं । जहाँ हिजो हामीलाई हान्न खोजेको थियो, त्यहीँ अलि पर चार पाँचवटा बाइक सुन्दरीजलबाट आउँदै थियो । बीचको बाइकमा हिजोको केटा पनि थियो । हिजो उसले चलाएको बाइक भने अर्केले चलाएको थियो ।
हामीसँगै प्रहरी भएर होला, हेर्ने आँट गरेन । त्यहीँबाट हामीले सइसा’पलाई धन्यवाद दिँदै फिर्ता पठायौं । सइसा’पले भन्नुभयो, ‘मेरो क्षेत्र गागलफेदी हो, जहाँ तपाईहरुमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ । त्यो आलापोट पर्छ । मैले हेर्न मिल्दैन । आलापोट या सुन्दरीजलमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ ।’
झण्डै १६ घण्टा आलापोटका डनको घेराबन्दीबाट उम्किएर जोरपाटी आइपुग्यौं । जोरपाटी आइपुगेपछि पनि बारम्बार फोन गरेर सांसद फुँयालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । हाम्रो ज्यान जोगाइदिएकोमा माननीय ज्यूलाई धन्यवाद !
सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० को घोषणा गरेको छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ । तर देशकै दाजुभाइ दिदीबहिनी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा असुरक्षित हुन्छन् भने विदेशी नागरिक कसरी त्यो ठाउँमा जान सक्छन् ?
अन्त्यमा, आलापोट जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने ‘टोले डन’देखि होसियार !
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ११, २०७६, ०५:१०:००